Lazainay aminao izay azo jerena ao amin'ny Château de Chambord | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Frantsa, General
ny Châteaux de la Loire dia andrim-panjakana raha ny dia no jerena, satria misy làlana hahitana ny kanto indrindra ary hankafizinay koa ireo tanàna sy tanàna hitantsika eny an-dalana. Amin'ity tranga ity dia hiresaka momba ny Castle of Chambord isika, trano mimanda mahafinaritra izay anisan'ny be mpitsidika indrindra amin'ny làlan'ny Lapan'ny Loire Valley. Ity lapa tsara tarehy ity dia trano fonenan'andriana tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary trano fialofana sy fety.
Andao hojerentsika izay azontsika atao mifanena aminay ao amin'ny Château de Chambord tsy mampino ary hahafantatra zavatra momba ny tantaran'ity toerana mampino ity isika. Raha te-handehandeha mamaky ny lohasahan'i Loire ianao, ity dia iray amin'ireo trano mimanda izay tsy maintsy anisany tena ilaina amin'ny làlanay.
1 Tantaran'ny Château de Chambord
2 Tahirin-kevitra momba ny Castle Chambord
3 Ny tohatra sy ny tohatra helix roa
4 Mitadiava salamanders
5 Ny zaridainan'i Chambord
6 Ny efitrano fandraisam-bahiny
7 Tranombakoky ny Castle Chambord
Tantaran'ny Château de Chambord
Tamin'ny nahatongavan'i Francis I fandresena tamin'ny Battle of Marignan tamin'ny 1515 dia nanapa-kevitra ny hamorona ity lapa lehibe ity izy. Ity lapa ity dia tsy natao ho fonenan'ny mpanjaka fa ho a mariky ny fahefana izay ho tonga fijoroana ho vavolombelona momba ny Renaissance frantsay. Natao toy ny tranoheva fihazana sy fety ity trano mimanda ity satria nipetraka tao Château de Blois sy Ambose ny mpanjaka. Ny maritrano voalohany dia noheverin'i Domenico di Cortona na dia niova taty aoriana aza. Heverina fa mety hiditra an-tsehatra mihitsy i Leonardo da Vinci, satria nandany ny telo taona farany niainany tao amin'ny Château de Clos-Lucé. Hatramin'ny 1981 dia tranokala iray lova manerantany. Taorian'i Francis I dia hadino ny trano mimanda mandra-pahatongan'i Louis XIII azy tamin'ny rahalahiny izay namerina azy io.
Tahirin-kevitra momba ny Castle Chambord
Ity lapa ity dia toerana mahavariana sy voatazona tsara. ny trano mimanda dia tena simetrika amin'ny fananganana ary manana tilikambo valo, efitrano efajato mahery, etona roan-jato eo ho eo sy tohatra 84. Ny zavatra misongadina iray dia ny rindrina voahodidin'ny hazo sy ala maherin'ny dimampolo kilometatra toradroa. Ireo zaridaina tsy mampino azy dia zavatra iray hafa manintona ny saina matetika. Naverina tamin'ny laoniny ny efitranony ary ao amin'izy ireo ianao dia afaka mahita zavatra taloha an-jatony izay tena zavakanto kanto. Raha fintinina, fitsidihana tsy ampoizina noho ny refy sy ny hakanton'izay rehetra hitantsika. Ity toerana ity dia tahiry voajanahary ihany koa ho an'ny biby dia sy lalao bibidia izay mivelatra amin'ny hektara an-jatony izay azon'ny besinimaro aleha mba hijerena ireo lalana.
Ny tohatra sy ny tohatra helix roa
Misy zavatra sasany ao amin'ny famolavolana ity lapa ity izay tena mampiavaka sy manokana. Ny tohatra helix avo roa heny dia ny firavaka ao amin'ny lapa ary nahazo aingam-panahy avy amin'i Leonardo da Vinci, tena manan-talenta izay tsy mitsahatra gaga. Misy tohatra roa mitarika antsika amin'ny gorodon'ny fiambenana ao amin'ny trano mimanda. Izy ireo dia tohatra roa izay miampita raha miakatra nefa tsy miampita, noho izany dia afaka mandeha iray na iray ianao nefa tsy miampita azy ireo hahatratra ny tampony.
Amin'ny famolavolana ny lapa afaka mahita sary sokitra vato maro isika ary ny iray amin'ireo zavatra hita dia ny salamander, biby izay toa manana solontena sy manan-danja. Ka raha te hitandrina ny antsipirian'ny asa lehibe ianao dia tadiavo ireo salamanders ireo satria ho hitanao sokitra ao anaty vato amin'ny valindrihana mihitsy aza izy ireo.
Ny zaridainan'i Chambord
Ity lapa ity dia misy zaridaina frantsay ihany koa izay ahitantsika ny fikarakarana fatratra ny antsipiriany sy ny simetitra. Saingy tsy toy izao foana io zaridaina io, satria vita ny famerenana amin'ny laoniny sy ny drafitra tamin'ny taona 2017. Ankehitriny isika dia afaka mankafy raozy 200 mahery, kirihitra an-jatony ary ahitra ny metatra. Ireo zaridaina frantsay mahazatra ireo tamin'ny andro nanjakan'i Louis XIV dia efa azo averina ary manatsara kokoa ny lanjan'ity lapa tsara tarehy ity izay voahodidin'ny faritra maitso kanto.
Ny efitrano fandraisam-bahiny
Trano ity maneho ny Renaissance any Frantsa ary ao amin'ny efitranony dia ahitantsika ireo zavakanto tena izy satria toerana tena karakaraina izy io. Ao amin'izy ireo no ahitantsika ohatra tsara momba ny fitanana lamba frantsay ho an'ireo liana amin'ity lohahevitra ity. Nefa afaka jerentsika ihany koa ireo efitrano nandry Louis XIV. Ao anatiny dia ho hitantsika fa trano mimanda izy io izay hikarakarana ny antsipiriany farany amin'ny sombin-tantara lehibe manan-danja.
Tranombakoky ny Castle Chambord
Ao amin'ity lapa ity dia ahitantsika koa a tranombakoka misy asa soratra sy sanganasa maro mendrika hijerena. Ao anatin'io no ahitantsika ny fanantonana taonjato faha-XNUMX, fitaovam-piadian'i Louis XV, ravin-kazo avy amin'ny fanamboarana sy sary hosodoko Savonnerie nataon'ny mpanoratra toa an'i Rigaud, Mignard na Girardet ankoatry ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Trano Chambord
Nosy Marquesas, paradisa
Tongasoa eto samoa